९ महिनामा सिनेमा हलको घाटा कति ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
९ महिनामा सिनेमा हलको घाटा कति ?
कोरोनाका कारण सिनेमा हलमा ताल्चा लागेको ९ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले भीडभाड हुने प्रायः सबै क्षेत्रलाई सञ्चालनको अनुमति दिइसक्दा समेत सिनेमा हल खोल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारको यसप्रकारको उदासिनताप्रति आक्रोशित हल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले पौष १० गतेबाट सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले कोरोनाका कारण ९ महिनादेखि देशभरका सिनेमा हल पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा २ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको बताएका छन् । उनले भने- ‘९/१० महिनाको अवधिमा २ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको अनुमान गरिएको छ । मल्टीप्लेक्सको अपरेटिङ खर्च नै महिनाको १० लाखभन्दा बढी छ । सिंगल हलको खर्च पनि त्यस्तै छ । सरकारसँग वार्ता गर्न जाँदा यसको डाटा लिएर जान्छौं ।’